Farany, lalao video 'Olona hafahafa' ofisialy! - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Farany, lalao video 'Olona hafahafa' ofisialy!
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyLalao video
Farany, lalao video 'Olona hafahafa' ofisialy!
by Shaun Horton Oktobra 4, 2017
nosoratan'i Shaun Horton Oktobra 4, 2017
Raha toa ny ankamaroan'ny olona ianao, miandry fatratra ny famotsorana ny vahiny Things fizarana faharoa amin'ny Netflix amin'ny 27 Oktobra. Inona no tokony hatao mandritra izany? Eny, ny vanim-potoana voalohany dia mbola ao amin'ny Netflix, mba hahafahanao mijery azy rehetra indray, izay mety tsy hevitra ratsy hitandrina azy rehetra ho vaovao. Lalao maro nataon'ny mpankafy no nipoitra nanerana ny Internet, fa ahoana kosa ny amin'ny zavatra ofisialy?
Raha manana smartphone ianao dia azonao atao ny misintona ilay ofisialy vahiny Things lalao finday! Vitan'ny orinasa BonusXP ilay orinasa izay nanao ny lalao Monster Crew sy Cavemania, niara-niasa tamin'ny Netflix, vahiny Things: Ny lalao no zava-drehetra antenainao avy amin'ny andian-dahatsoratra miorina amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fijery sy ny mozika dia mifototra amin'ny lalao video tany am-boalohany, ary miantso fahatsiarovana ireo lalao toy ny The Early Legend of Zelda andiany sy ny tsiambaratelon'i Mana.
Ao amin'ny lalao, azonao atao ny mizaha ny tanànan'ny Hawkins, Indiana toy ny momba ny mpilalao fototra rehetra, manomboka amin'ny Sheriff Hopper ary mamoha ny zazalahy, ary Nancy izay samy manana ny fahaiza-manao manokana mamela anao hiatrika ireo piozila sy fahavalo isan-karazany. Hitsidika ny Upside Down koa ianao, hivezivezy ao amin'ny Hawkins Lab, ary hamakivaky ny ala Mirkwood. Mila fahalalahana vitsivitsy ny lalao, araka ny mety antenaina, mba hanomezana fahafinaretana sy fanamby. Tsy entin'i Nancy any amin'ny vorondolo ohatra ny batony baseball, ohatra. Aza matahotra anefa fa mbola misy waffle ho hita sy hananana!
Tsy mila miandry an'io koa ianao, efa miala ny lalao izao iOS ary Android, ary maimaim-poana! Ka ahoana ny hevitrao? Hanamora kokoa ny fiandrasana ve ny lalao ofisialy, sa hampitombo ny fanantenanao amin'ny vanim-potoana vaovao ity?
Sary naseho tamin'ny alàlan'ny RollingStone.com
lalao video horohorolalao findayvahiny Things
Shaun Horton no mpanoratra ny tantara foronina sci-fi / horohoro Hannah sy Kilasy 5, ary koa ny horonantsary Cenote mampihoron-koditra. Manoratra avy any amin'ny faritra avaratra andrefana Pasifika izy, mitazona eo anelanelan'ny tanànan'ny Seattle sy ny ala ao amin'ny ala nasionalin'ny Olaimpika. Mpankafy an'i Horror nandritra ny androm-piainany izy, nanomboka tamin'ny fahitana an'i Gremlins tamin'ny faha-4 taonany. Taona maro taty aoriana dia hitany ny asan'i Stephen King, miambina amin'ny alina izy mamaky ilay boky hoe IT. Nanomboka teo dia nanohy nanitatra ny fahalianana izy tamin'ny alàlan'ny mpanoratra toa an'i Dean Koontz, sarimihetsika toy ny Nightmare ao amin'ny Elm Street sy Alien, ary ireo andian-dahatsary Dead Space sy Resident Evil.
'Alin'ny Maty velona' dia mahazo famerenana amin'ny laoniny 4K
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (9) AppleTV + (4) Blu Rays (5) Horohoro amin'ny hatsikana (46) Tantara an-tsary (13) Facebook (andiany) (1) Angano (39) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (5) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (54) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,651) Sarimihetsika mahatsiravina (238) Horror Series (62) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (4) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (35) Resadresaka nifanaovana (andiany) (2) Horohoro LGBTQ (38) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (48) Sarimihetsika (14) Mozika (35) Netflix (sarimihetsika) (21) Netflix (andiany) (25) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (8) Shudder (sarimihetsika) (44) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (35) Sarimihetsika mivantana (65) Streaming Series (25) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (195) Tranofiara (andiany) (37) Heloka tena izy (43) Lalao video (178) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)